Impilo, uKhuseleko kunye nokusiNgqongileyo-SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd.
Ukuziphatha kweshishini elinoxanduva kunye nokukhula koqoqosho oluzinzileyo kube yinxalenye ye-DNA ukusukela oko kwafunyanwa i-XY Tower.
Namhlanje uphuhliso oluzinzileyo nolwezoqoqosho yimithetho-siseko yethu eyinxalenye yenjongo yethu kunye nenkonzo kwaye yenziwa ngokusesikweni ngomsebenzi wethu ocwangcisiweyo.Sikholelwa ukuba ulungelelwaniso olufanelekileyo lunakho kwaye lufanele ukufezekiswa phakathi kophuhliso loqoqosho kunye neenjongo zokusingqongileyo.Okujoliswe kuko kunye neenjongo zokusingqongileyo zimiselwe amashishini ethu ajongwa lulawulo lwarhoqo kunye neentshukumo zohlolo kunye nocupho oluzimeleyo lwangaphakathi nolomntu wesithathu.I-XY Tower ikholelwa kwaye ikhuthaza ukuba bonke abasebenzi bethu banoxanduva lokubambelela kwiithagethi zendalo esingqongileyo, iinjongo kunye neemfuneko zolawulo.Sinikezela ukuba sibe yinkokeli kulawulo olunoxanduva lwe-HSE kwiinkampani zoontanga.
I-XY Tower izinikele kwingqikelelo yokuba zonke iingozi ziyathinteleka kwaye sizimisele kumgaqo-nkqubo wokungabikho kweengozi.Ukufezekisa oku kuzibophelela kunye nokukhuthaza inkcubeko yokuphuculwa okuqhubekayo kwempilo yethu yokhuseleko kunye nemisebenzi yokusingqongileyo, le mfuno ilandelayo iya kulandelwa:
Ukuzigcina sisazi kwaye sithobela yonke iMithetho nemigaqo yangoku neyexesha elizayo.
Sebenzisa imigangatho engqongqo kunye neenkqubo kwinkampani yethu.
Impilo yabasebenzi yeyona nto iphambili kwinkampani.I-XY Tower iqinisekisa ukhuseleko kwiindawo zokusebenza kwaye bonke abaqeshwa mababe kwizixhobo zoKhuseleko kwindawo yokusebenzela, ngelixa umqeshwa kufuneka alandele ngokungqongqo ikhowudi yemveliso yokhuseleko.
Khusela iNdalo ngokugcina amanqanaba asezantsi enkunkuma eveliswayo ngemisebenzi eyahlukeneyo, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwemithombo.
Ukuchonga rhoqo imimandla enokubakho yokuphuculwa kweNkqubo yoLawulo lwe-HSE nokuseka amanyathelo ayimfuneko okuphumeza olo phuculo.